Lego Speed Champions 30343 McLaren Elva ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများ
15 / 06 / 2021 03 / 08 / 2021 ရော့ Paton 310 Views စာ0မှတ်ချက် 30342 Lamborghini Huracánစူပါ Trofeo EVO, 30343 McLaren အဲလ်ဗာ, 76902 McLaren အဲလ်ဗာ, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Lamborghini က, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Speed Champions, McLaren, McLaren အဲလ်ဗာ, Polybag, reviews, Speed Champions
Lego ပိုးအိစံ 30343 McLaren Elva သည်လက်ဆောင်နှင့်အတူ - ၀ ယ်ယူခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Speed Champions.
30343 McLaren Elva ကိုဇွန် ၇ ရက်မှဇွန် ၂၀ ရက်အထိရရှိနိုင်သည် LEGO.com နှင့် Lego စတော့ရှယ်ယာနောက်ဆုံးနေစဉ်အနည်းဆုံး£ 40 / $ 40 / € 40 အမိန့်အားလုံးနှင့်အတူပါဝင်သည်လက်ဆောင်နှင့်အတူ - ဝယ်ယူအဖြစ်စတိုးဆိုင်များ။
ဒါပထမ ဦး ဆုံးမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ် Speed Champions ပိုးအိစံ (၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၃၀၃၄၂ Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO ဖြစ်သည်) ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးအလွန်စုဆောင်းနိုင်သော ဦး တည်ချက်လမ်းကြောင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Lambo အသေးစားကိုတံခါးလေးချောင်းဖြင့် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်နေရာတွင် ၃၀၃၄၃ McLaren Elva ကိုကျယ်ပြန့်သောလုံးငါးခုဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ ကျယ်ပြန့်သောကားများ၏ switch သည် ၆ လုံးမှရှစ်အထိကျယ်သည်။xtra width ကိုဒီသေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
အဓိကအားဖြင့်သူကတစ် ဦး အီးဖွင့်လှစ်xtra ပျော်စရာနှင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရှုပ်ထွေးနည်းနည်းဖန်တီးရန်အသေးစိတ်အဆင့်နှင့်ဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ Lego သေဆုံးသောကားဖြစ်သည့် Hot Wheels ကစားစရာကားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
bodywork ထောင့်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အလင်းရောင်နှင့်ရှေ့နှင့်နောက်တောင်ပံပုံစံများကိုပြောင်းလဲခြင်းအားလုံးသည်ဤ ၅ လုံးပါသောတီထွင်မှုတွင် ၃၀၃၃၃ McLaren Elva ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြည့်စွက်မှုဖြစ်စေသည်။ Speed Champions လိုင်းနှင့်ကောင်းတဲ့ကောင်တာart Full-size ကိုရန် 76902 McLaren အဲလ်ဗာ စကားမစပ်၊ ငါတို့ချစ်သော LEGO အစုံ).
အကယ်၍ ၎င်းသည်လမ်းညွှန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်ကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည် Speed Champions ကွမ်းခြံကုန်း ဝင်, ထို့နောက် 30343 McLaren အဲလ်ဗာလည်း st ခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်art ပိုကြီးတဲ့စကေးဖို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့စုဆောင်းခြင်းအပြိုင်၏ Speed Champions မော်တော်ယာဉ်များ။
၃၀၃၄၃ McLaren Elva ကိုဇွန် ၇ ရက်မှ စတင်၍ လက်ဆောင်ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးဇွန် ၂၀ ရက်အထိဖြစ်မည်၊ ပေါင် ၄၀ / ဒေါ်လာ ၄၀ / ယူရို ၄၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသော ၀ ယ်ယူမှုများတွင်ပါ ၀ င်မည် LEGO.com နှင့် Lego စတော့ရှယ်ယာနောက်ဆုံးနေတုန်းစတိုးဆိုင်များ။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← ခုနစ်ကြိမ် LEGO ထုပ်ပိုးအထက်နှင့်ကျော်လွန်သွားပြီ
Lego Friends ရွေးချယ်နိုင်သောအွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်အတူ Central Perk Mug GWP ကိုရနိုင်သည် →